All Articles – Page2– My Doctor
You are here:Home-All Articles
How to keep your skin from Sunburn
By editor|2020-03-30T03:07:07+00:00January 27th, 2020|Categories: All Articles, အလှအပ, အလှအပနှင့်နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ|
နေရောင်အောက်ထွက်တဲ့အခါ အသားရည်မပျက်စီးအောင်ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းကြမလဲ။? အခုခေတ်မှာဆိုရင်တော့ လူတိုင်းက အသားအရည်ထိန်းသိမ်းမူကိုပိုပြီးဂရုတစိုက်နဲ့လုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်။ထိုကဲ့သို့ အသားအရည်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရာတွင် အရေးကြီးသော အချက်တစ်ချက်ဖြစ်တဲ့နေရောင်ခြည်ဒဏ်(UV)မှာကာကွယ် ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သိပ်မကြာခင်မှာဆိုရင် ဆောင်းရာသီကုန်ဆုံးပြီးပူပြင်းလှတဲ့နွေရာသီရောက်လာတော့မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ်အသားအရည်အတွက်မပျက်စီးအောင် ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းသင့်လဲဆိုရင်တော့------------- (၁)လုံခြုံစွာဝတ်စားသွားပါ။ နေရောင်ခြည်ထဲသွားတော့မယ်ဆိုရင်ဘောင်းဘီရှည်နှင့် ချည်သားအင်္ကျီလက်ရှည်ကိုဝတ်ဆင် သွားသင့်ပါတယ်။ (၂) နေကာမျက်မှန်ကိုတပ်ဆင်ပါ။ကိုယ့်အတွက် ဖက်ရှင်ကျစေနိုင်သလို မျက်စိကိုလည်း(UV rays) တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မူမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ (၃) အတတ်နိုင်ဆုံး မနက်(၁၀)နာရီမှ ညနေ(၄)နာရီအတွင်းနေရောင်ခြည်နှင့်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့နိုင်ပြီးပူပြင်းလှသော နေရာ များသို့ သွားခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ (၄) နေရောင်ကာကရမ်ခ်ကိုလိမ်းပါ။နေရောင်ကာကရမ်ခ်ကိုအပြင်သို့မထွက်ခင် (15) minsကြို၍လိမ်းထားပါသည်။နေရောင် ကာကရမ်ခ်ကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူရာတွင်လည်း SPF 15ပါတဲ့ဟာမျိုးကိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ (၅)နေပူဆာလုံခြင်းမှာရှောင်ကြဉ်ပါ။ထိုကဲ့သို့ နေပူဆာလုံရာတွင်နေရောင်ခြည်နှင့်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ရတာကြောင့်အသားရည် ကိုပျက်စီးစေရုံသမျှမကဘဲ အရေပြားကင်ဆာကိုပါဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ (၆)Vitamin D ရရှိဖို့ အတွက်နဲ့နေပူဆာလုံခြင်းကိုမပြုလုပ်သင့်ပါ။တကယ်လို့ Vitamin
By editor|2020-03-30T02:48:22+00:00January 27th, 2020|Categories: All Articles, အထွေထွေ, အထွေထွေရောဂါများ|
အေးမြသော ရာသီဥတုကြောင့် ရရှိလာနိုင်မယ့် ကျန်းမာရေးအကျိုး(၅)မျိုး (၁)ဦးနှောက်၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားစေခြင်း ပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုမှာဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုလျော့ချဖို့အတွက် glucose ကိုလိုအပ်တာထက်ပိုပြီးအသုံးပြုရပါ တယ်။ထိုအခါမှာ ဦးနှောက်က လိုအပ်တဲ့ glucose ကိုအလုံအလောက်မရနိုင်တဲ့အတွက် စဉ်းစားတွေးခေါ်မူများကိုပြုလုပ် ရာတွင်ထင်သလောက်အကျိုးအများအပြားမရနိုင်ပါဘူး။သို့သော် အေးသောရာသီဥတုမှာဆိုရင်တော့ ဦးနှောက်ကလိုအပ် တဲ့ glucose ဓာတ်ကိုအလုံအလောက်ရရှိတာကြောင့် ပိုမိုအဆင်ပြေစွာစဉ်းစားတွေခေါ်မူတွေကိုလုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါ တယ်။ (၂)Calories ကိုလောင်ကျွမ်းစေနိုင်ခြင်း အေးတဲ့ရာသီဥတုမှာဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်က temperature ကိုထိန်းညှိပေးဖို့ အတွက် ပုံမှန်ထက်ပို၍ အလုပ်လုပ်ရပါ တယ်။2017 ခုနစ်တွင် အမေရိကန်မှ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ temperature-5 ‘C နှင့် 10 ‘Cမှာတောင်တက်ခြင်းက 10’C မှာတောင်တက်ခြင်းထက်ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ Calories ကိုပိုမိုလောင်ကျွမ်းစေနိုင်ပါတယ်။ (၃)အိပ်စက်မူကိုပို၍ကောင်းမွန်စေခြင်း အိပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ခါ ခန္ဓာကိုယ်က
Things to do for good brain
By editor|2020-04-15T13:16:42+00:00January 27th, 2020|Categories: All Articles, အထွေထွေ, အထွေထွေရောဂါများ|
နဂိုရှိရင်းစွဲထက်ပိုပြီး ဉာဏ်ကောင်းစေလာဖို့ ဦးနှောက်အတွက်လိုအပ်သော လေ့ကျင်းခန်း(၁၀)မျိုး လူအများစုပြောကြတဲ့ ဦးနှောက်ကမစဉ်းစားဘဲနေရင်တုံးသွာတယ်ဆိုသလိုမျိုးဘဲဦးနှောက်ကိုထက်မြတ်စေဖို့ အတွက် နေ့စဉ် ဦးနှောက်ကိုအသစ်သော လုပ်ဆောင်မူတွေလုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ဆောင်မူတွေ လုပ်ဆောင်ပေးရမယ်ဆိုတာကတော့ အောက်မှာတစ်ချက်စီဖော်ပြပေးထားတာမို့ဆက်လက်ဖက်ရှူပေးကြပါနော်…….. ---ကိုယ်ပုံမှန်သွားတိုက်နေကျပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲပုံစံပြောင်းပြီးတိုက်ကြည့်ပါ။နဂိုကညာဘက်လက်နဲ့တိုက်တယ်ဆိုရင် အခု ဘယ်ဘက်လက်နဲ့ပြောင်းတိုက်ကြည့်ပါ။ --မနက်ခင်းမှာကိုယ်ပုံမှန်လုပ်နေကြအရာမဟုတ်ဘဲအခြားမတူသော်အရာများကိုလုပ်ဆောင်ကြည့်ပါ။ဥပမာအနေနဲ့ ပြောရ မယ်ဆိုရင် အရင်ကကြည့်နေကျTVလိုင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲလိုင်းပြောင်းကြည့်တာမျိုး၊အရင်ကမနက်စာစားပြီးမှ အပြင်ထွက်ဖို့ အင်္ကျီလဲတယ်ဆိုရင် အခုအကျီၤလဲပြီးမှ မနက်စာစားပါ။ ---ကိုယ်စားပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့(ပြက္ခဒိန်၊နာရီ)အစရှိသောပစ္စည်းတွေကိုအပေါ်အောက်ပြောင်းပြန်ထားကြည့်ပါ။ ---နှာခေါင်းနှင့် မရင်းနှီးသော အနံံ့အသစ်များကိုရှူကြည့်ပါ။ဥပမာ အနေနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင် အခန်းအမွှေးဖြန်းဆေးကို နဂိုသုံးနေကျ အနံ့မျိုးမဟုတ်ဘဲ အနံ့ပြောင်းပြီးသုံးကြည့်ပါ။ ---ကိုယ်ထိုင်နေကျနေရာမျိုးမဟုတ်ဘဲနေရာအပြောင်းအလဲမှာထိုင်ကြည့်ပါ။ ---စားနေကျမဟုတ်သော အသစ်သောအရသာများကိုစားကြည့်ပါ။ ---ကားပြတင်းပေါက်မှန်ကိုဖွင့်ပြီး မောင်းကြည့်ပါ။ ---ဖတ်နေကျမဟုတ်တဲ့ မတူညီသောစာများကိုဖတ်ကြည့်ပါ။ ---ဈေးဝယ်ထွက်ရာတွင် ဝယ်နေကျပစ္စည်းကိုတ်းရွေးတာမျိုးမလုပ်ဘဲ အခြားပစ္စည်းအသစ်များရဲ့ ingredients ကိုဖတ်ကြည့် ပါ။ အခုပြောပြခဲ့တဲ့အချက်(၁၀)ချက်က ခက်ခက်ခဲခဲ
By editor|2020-04-15T13:16:59+00:00January 23rd, 2020|Categories: All Articles, အထွေထွေ, အထွေထွေရောဂါများ|
“ဝမ်းတစ်လုံးကောင်းဖို့ခေါင်းမခဲရအောင်” ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဘဝနေထိုင်မှုမှာ ဝမ်းပုံမှန်မသွားတာ၊ဝမ်းမချုပ်ခြင်းပြဿနာကိုအမြဲကြုံတွေနေရပါတယ်။ ဒါကြောင့် နေ့စဉ်လူနေမှုပုံစံထဲက ဝမ်းချုပ်ခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရင်တွေနဲ့ ဝမ်းချုပ်ခြင်း မဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြုမှုနေထိုင် ကြမလဲကိုစာဖတ်သူတွေ အတွက်ဗဟုသုတရစေဖို့ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ “ဝမ်းချုပ်တာကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေကတော့” (1)အိမ်သာမှန်မှန်တက်တဲ့ အကျင့်မရှိခြင်း။ (2)အခြေအနေအရ ဝမ်းသွားလိုသော်လည်း အောင့်ထားရမှုများခြင်း။ (3)အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး ဒါမှာမဟုတ် ဝမ်းနှုတ်ဆေးများ အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်း။ (4)ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့အသီးအနှံံ့ စားသုံးမှုနည်းခြင်း ဒါမှမဟုတ် စားလေးစားထမရှိခြင်း။ (5)ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းများ မပြုလုပ်ခြင်း။ (6)ရေဓါတ်လုံလောက်အောင် မသောက်ခြင်း။ “ဝမ်းချုပ်ခြင်း မဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြုမှု နေထိုင်သင့်သလဲ” (1)ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု မှန်မှန်ပြုလုပ်ပါ။ (2)ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ အသီးအနှံ့များများစားပါ။ (3)ရေများများသောက်ပါ။ (4)ဝမ်းသွားချင်ရင်မအောင့်ထားပါနဲ့။ (5)အိမ်သာမှန်မှန်တက်တဲ့ အကျင့်ကိုမွေးမြူပေးပါ။ (6)ဝမ်းနှုတ်ဆေးကိုအလွယ်တကူမသောက်ပါနဲ့။ ဒီအချက်တွေကတော့ ဝမ်းချုပ်ခြင်းမဖြစ်အောင် ပြုမှုနေထိုင်ရမဲ့ အချက်တွေနဲ့ ဝမ်းချုပ်ခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေပါ။ဒါကြောင့် ဒီအချက်တွေကိုရှောင်ကြဉ်လိုက်ပြီးဝမ်းတစ်လုံးကောင်းပြီးခေါင်းမခဲရအောင် ပြုမှုနေထိုင်
By editor|2020-04-15T07:51:01+00:00January 23rd, 2020|Categories: All Articles, အထွေထွေ, အထွေထွေရောဂါများ|
“သင့်စိတ်ကျရောဂါခံစားနေရပြီလား” စိတ်ကျရောဂါလို့ ပြောလိုက်တာနဲ့လူတိုင်းရင်နှီးဖူးတဲ့စကားတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အခုလို ပြိုင်ဆိုင်မှုများတဲ့ခေတ်မှာ စစ်တမ်းတွေအရလူ(၃)ယောက်မှာ(၁)ယောက်ကစိတ်ကျရောဂါကို တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန် ခံစားနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါအပြင်လူတိုင်းတော်တော်များများပြောကျပါတယ် ငါ depression ဝင်တယ်ဆိုပြီးပြောကြပါတယ်၊ဒါကြောင့် စိတ်မပျော်တာ စိတ်ညစ်တာလေးတစ်ခုထဲနဲ့ စိတ်ကျရောဂါခံစားနေရပြီလို့ပြောလို့မရပါဘူး မိမိတစ်ကယ်စိတ်ကျရောဂါခံစားနေရပြီလား ဆိုတာ အချက်(၉)ချက်ကိုကြည့်ပြီး စိတ်ကျရောဂါကုဆရာဝန်တွေက ဆုံးဖြတ်ပေးပါတယ်။ ဒါတွေကတော့ (1)စိတ်ကျတယ်လို့ခံစားရတယ်။မပျော်ရွှင်ဘူးလို့ခံစားရတာကို(၂)ပတ်နဲ့အထက်ခံစားရခြင်း။ (2)အရင်တုန်းကမိမိကို ပျော်ရွှင်စေခဲ့တဲ့အရာ၊မိမိဝါသနာပါခဲ့တဲ့အရာကိုမလုပ်ချင်တော့ခြင်း၊လုပ်ဖို့လဲစိတ်မပါတော့ခြင်း။ (3)ခန္ဓာကိုယ် စိတ်ကျလာခြင်း၊ဝိတ်ကျတယ်လို့ပြောရင် အရင်လက ပေါင်ချိန်ထပ် အခုလပေါင်ချိန်5% လျော့ခြင်း။ (4)အိပ်မရခြင်း၊အအိပ်အနေနည်းခြင်း ဒါမှမဟုတ် ပုံမှန်ထက်ပိုပြီးအိပ်ခြင်း၊အိပ်ပေမဲ့အိပ်ရေးမဝသလိုအမြဲခံစားနေရခြင်း၊ လန်းဆန်းမူမရှိခြင်း၊ (5)အားအင်မရှိသလိုခံစားရခြင်း။ (6)ပင်ပန်းနွမ်းနယ်သလိုအမြဲခံစားနေရခြင်း။ (7)လှုပ်ရှားသွားလာမှုနှေးကွေးခြင်း(စိတ်သွားတိုင်းကုယ်မပါခြင်း) (8)အာရုံစူးစိုက်လို့မရခြင်း(တစ်ခုခုဆိုမေ့တတ်လာခြင်း) (9)ကိုယ့်ကိုကိုယ်တန်ဖိုးမရှိသလိုခံစားရခြင်း၊မျှော်လင့်ချက်မရှိသလိုခံစားရခြင်း ဒါမှတစ်ဆင့်တဖြည်းဖည်းမိမိကိုယ်သေရင် ကောင်းမယ်ဆိုပြီးခံစားရလာခြင်း။ဒီအချက်တွေကိုကြည့်ပြီး စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်တွေက စိတ်ကျရောဂါခံစားရတယ်လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် စိတ်ကျရောဂါဆိုပြီးသတ်မှတ်ကျပါတယ်။ အချက်(9)ချက်မှာ(5)ချက်နဲ့အထက် ပါဝင်ပြီးဒီအချက်တွေကြောင့်
By editor|2020-04-15T13:17:29+00:00January 23rd, 2020|Categories: All Articles, အထွေထွေ, အထွေထွေရောဂါများ|
“သွေးပေါင်ကျခြင်းအကြောင်းသိကောင်းစရာ(2)” သွေးပေါင်ချိန်လိုက်တိုင်းအမြဲ 90/60 ဆိုရင်တော့ ဘာလက္ခဏာမှာမပြပါဘူး ဒါကပုံမှန်ပါပဲ။ ဆေးကုစရာမလိုသလိုစိတ် လဲမလိုပါဘူး။ရုတ်တရက်သွေးပေါင်ကျတဲ့အထဲမှာပါဝင်တဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့ အိပ်ရာကနေမိုက်ခနဲ မူးတာတို့၊ ထိုင်ရာက ရုတ်တရက်ထလိုက်ရင်မိုက်ခနဲ မူတာတို့ဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခါတစ်လေ အချိန်တွေမှာဖြစ်ရင်တော့ အရမ်းစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒါကရုတ်တရက် လူခန္ဓာကိုယ်ယိမ်းယိုင်လှိုင်ရှားမှုကြောင့် ရုတ်တရက် သွေးပေါင်ကျတဲ့ လက္ခဏာပါ။ မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်လည်တည်မတ်ပေးလိုက်တာနဲ့ရပါတယ်၊ပြန်ကောင်းသွားပါတယ်။ဒါကတော့လူအများစုဖြစ်တက်ကြပါတယ်။တစ်ခါတစ်လေဖြစ်ရင် စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ဒါပေမဲ့ မကြာခဏဖြစ်နေရင်တော့ပြန်လည်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ “ဘယ်လိုပုံစံတိုင်းရင်မှန်ကန်တဲ့သွေးပေါင်ကိုရရှိမလဲ?” အခုခတ်မှာဆေးရုံဆေးခန်းမှာပဲသွေးပေါင်တိုင်းလို့ရတာမဟုတ်ဘဲ မိမိအိမ်မှာသွေးပေါင်တိုင့်တဲ့စက်ကိုဝယ်ပြီး တိုင်းလို့ရ ပါတယ်။ဒါကြောင့်မှန်ကန်တဲ့သွေးပေါင်ရဖိုအရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်လူတစ်ယောက်ကိုသွေးပေါင်တိုင်းရင်ထိုင်ရက်တိုင်းတဲ့ နည်းကအမှန်ကန်ဆုံးပါပဲ၊လူတစ်ယောက်မှာထိုင်ရက်ပုံစံနဲ့မတ်တပ်ရပ်ပြီးတိုင်းတဲ့ပုံစံသွေးပေါင်တိုင်းတာမတူသလို၊မနက်ခင်း ပိုင်းတိုင်းတာနဲ့ ညပိုင်းတိုင်းတာမတူပါဘူး။ လှုပ်ရှားသွားလာပြီး စကားတွေပြောပြီးတိုင်းတာနဲ့ နားနားနေနေ နေပြီးတိုင်းတဲ့ သွေးပေါင်မတူပါဘူး။ဒါကြောင့် လူတစ်ယောက်ထဲမှာကိုပဲသူရဲ့လှုပ်ရှားသွားလာမှုနဲ့တိုင်းတဲ့အချိန်ပေါ်မူတည်ပြီးသွေးပေါင်မ တူညီပါဘူး။ “သွေးပေါင်ကျစေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့” (1)နေမကောင်းဖြစ်ပြီးမကြာခဏအန်နေခြင်း။ (2)ရေမသောက်တာကြာနေခြင်း၊ရေမသောက်လို့လဲသွေးပေါင်ကျတတ်ပါတယ်။ဥပမာ ရေမသောက်ဘဲစကားတွေအများကြီး ပြော အလုပ်တွေလုပ်ပြီး ထလိုက်တဲ့အခါကျရင် မူသွားတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်၊လှုပ်ရှားလွန်ကဲရင်လဲသွေးပေါင်ကျတတ်ပါ
By editor|2020-04-15T13:17:51+00:00January 23rd, 2020|Categories: All Articles, အထွေထွေ, အထွေထွေရောဂါများ|
“သွေးပေါင်ကျခြင်း အကြောင်းသိကောင်းစရာ(1)” နေမကောင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ခေါင်းမူးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဆေးရုံဆေးခန်းမသွားမှီ ဒါမှမဟုတ်ဆေးရုံ ဆေးခန်း ရောက်တဲ့အချိန်မှာ အရင်ဆုံးလုပ်တာက သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းကြတာပါ။သွေးပေါင်ချိန်လို့လူတိုင်းအလွယ်ပြောကြပေမဲ့ သွေးဖိအားနှုန်းတိုင်းတာ လို့ပြောရင် ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ သွေးဖိအားနှုန်းတိုင်းတာတဲ့ယူနစ်က mmHg(မီလီမိတာမာကျူရီ)ဖြစ်လို့ပါ။ “သွေးပေါင်ကျတယ်ဆိုတာဘာလဲ? ဘာကြောင့်သွေးပေါင်ကျတာလဲ?” သွေးပေါင်ကျတယ်ဆိုတာ အနည်းငယ်ရှင်းပြချင်ပါတယ်။နှလုံးကညှစ်လိုက်ကတဲ့သွေးတွေကိုသွေးကြောထဲကိုတိုးဝင်စီးဆင်းသွားပါတယ်။အဲဒီလိုသွေးကြောထဲကိုတိုးဝင်စီးဆင်းသွားတဲ့အခါမှာသွေးကြောထဲကိုတိုးတဲ့သွေးကိုအပေါ်သွေးလို့ခေါ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်မှာ သာမန်လူတွေသိနေကြတာကအပေါ်သွေး( 120) အောက်သွေး (80) ဆိုပုံမှန်ပဲဆိုပြီးသိကြပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေလဲလာမေးကြတယ်အပေါ်သွေး(110)အောက်သွေး(80)ဒါဆို သွေးတိုးပါပြီ တစ်ချို့ကလဲBp110/70mmHg ဖြစ်နေပါပြီ သွေးပေါင်ကျနေပါပြီဆိုပြီးပြောတဲ့လူတွေလဲရှိပါတယ်။အဲ့တော့ပုံမှန်ပြောရရင် လူကြီးတစ်ယောက်က အမြင့်ဆုံး အနေနဲ့ အပေါ်သွေး (140) အောက်သွေး (90) အထိအများဆုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့်လူကြီးတစ်ယောက်ကအမြင့်ဆုံး (140) ထက်ကျော်ရင် သွေးတိုးရောဂါကိုသတ်မှတ်လို့ပါတယ်။အနိမ့်ဆုံးအနေနဲ့ အပေါ်သွေး (90) အောက်သွေး (60) အထိ အနည်းဆုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်
By Editor Two|2020-04-15T13:18:21+00:00January 10th, 2020|Categories: All Articles, မျိုးဆက်ပွါးကျန်းမာရေး|
“အသကျ ၄၀ ကြောျ အမြိုးသမီးနှင့ျ သားဆကျခွားခွငျး” – ဒေါကျတာ ဖွိုးသီဟ လူတှပွေောလေ့ရှိတဲ့ စကားတဈခှနျး ရှိပါတယျ။ အသကျ ၄၀ ကြောျမှ ဘ၀ စတာတဲ့။ မှနျသင့ျသလောကျတော့ မှနျပါတယျ။ အသကျ ၄၀ ကမြှ ဘဝတဈခုကို ကောငျးကောငျးဖွတျသနျးဖူးတဲ့ အတှေ့အကွုံ ရှိလာတာကိုး။ လူလတျပိုငျးဆိုတဲ့ အရှယျရောကျလာပွီ။ စီးပှားရေးမှာဆိုလညျး လုပျငနျးတဈခု စလို့ကောငျးတဲ့အရှယျ။ မိသားစုအနနေဲ့လညျး တောျတောျလေး အခွတေကဖြွဈနမေယ့ျ အခြိနျ။ ငယျရှယျစဉျကတော့ ဘဝအတှကျက ကွိုးစားနရေတာတှေ၊ အလုပျတှလေုပျ၊ ပညာတှသေငျနရေတာတှကွေောင့ျ မအားကွဘူး။ ပွောရရငျ တညျဆောကျဆဲကာလတှေ။ ၄၀ ကြောျကတော့ တညျငွိမျဆဲကာလာ။ ဒါကွောင့ျလညျး ၄၀ ကြောျမှ
By Editor Two|2020-01-20T05:13:16+00:00January 9th, 2020|Categories: All Articles, ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်မိခင် ကျန်းမာရေး, မျိုးဆက်ပွါးကျန်းမာရေး|
“အသက် ၄၀ ကျော် အမျိုးသမီးနှင့် သားဆက်ခြားခြင်း” – ဒေါက်တာ ဖြိုးသီဟ လူတွေပြောလေ့ရှိတဲ့ စကားတစ်ခွန်း ရှိပါတယ်။ အသက် ၄၀ ကျော်မှ ဘ၀ စတာတဲ့။ မှန်သင့်သလောက်တော့ မှန်ပါတယ်။ အသက် ၄၀ ကျမှ ဘဝတစ်ခုကို ကောင်းကောင်းဖြတ်သန်းဖူးတဲ့ အတွေ့အကြုံ ရှိလာတာကိုး။ လူလတ်ပိုင်းဆိုတဲ့ အရွယ်ရောက်လာပြီ။ စီးပွားရေးမှာဆိုလည်း လုပ်ငန်းတစ်ခု စလို့ကောင်းတဲ့အရွယ်။ မိသားစုအနေနဲ့လည်း တော်တော်လေး အခြေတကျဖြစ်နေမယ့် အချိန်။ ငယ်ရွယ်စဉ်ကတော့ ဘဝအတွက်က ကြိုးစားနေရတာတွေ၊ အလုပ်တွေလုပ်၊ ပညာတွေသင်နေရတာတွေကြောင့် မအားကြဘူး။ ပြောရရင် တည်ဆောက်ဆဲကာလတွေ။ ၄၀ ကျော်ကတော့ တည်ငြိမ်ဆဲကာလာ။ ဒါကြောင့်လည်း ၄၀ ကျော်မှ
By Editor Two|2020-04-01T09:08:26+00:00January 2nd, 2020|Categories: All Articles, စားသောက်မှုပုံစံ, အလှအပ|
ဝိတ်ချဖို့အတွက် ညစာ ရှောင်သင့်လား သင်ဟာ ဝိတ်ချသူတစ်ယာက်ဆိုပါက သင့်အနေနဲ့ ကယ်လိုရီတွေကို လိုတာထပ် ပိုမစားဖို့ ၊ လျှော့မစားဖို့လိုပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ညစာရှောင်ခြင်းလိုမျိုးတွေဟာ ကယ်လိုရီ လျှော့ချရာမှာ အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်လာပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် သတိပြုရန်မှာ ဒီလို ညစာရှောင်ခြင်းလိုမျိုးကနေ ကျန်းမာစွာ ဝိတ်မကျဘဲ ပြောင်းပြန်အကျိုးသက်ရောက်မှုအနေနဲ့ အလွန်အမင်းဆာလောင်မွတ်သိပ်စေခြင်း ဒါမှမဟုတ် လုံလောက်တဲ့ အာဟာရများ မရရှိခြင်း အစရှိသည်တို့ ဖြစ်သွားစေနိုင်ပါတယ် ။ ညစာရှောင်ခြင်းနှင့်ဝိတ်ကျခြင်း သင့်အနေနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းစေရန် လုပ်ဆောင်နေသူဆိုပါက ဘယ်လိုနည်းလမ်းပဲ သုံးပါစေ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာကယ်လိုရီနည်းနည်းစားသုံးရေး ဖြစ်သည် ။ ခန္ဓာကိုယ်တွင် အဆီတပေါင်တိုင်းသည် ကယ်လိုရီ ၃၅၀၀ နှင့်ညီမျှသည့်အတွက်